Etu ị ga-esi sọfụ n'enweghị nsogbu na netwọk Wi-Fi | Site na Linux
Anyị bi n’ụwa ebe ọtụtụ ebe Wi-Fi na njikọ ịntanetị na-akwụghị ụgwọ. Na ụlọ nkwari akụ ọ bụla, ebe a na-ere mmanya ma ọ bụ kafe ọ bụla, ị ga-ahụrịrị na njikọ ndị a dị mma, ebe ọ bụ na ha na-abụkarị emeghe wifis, na-enweghị nchebe ọ bụlaN'okwu ndị ahụ, njikọ ahụ enweghị nchekwa, mana n'ezie, ị ka nwere mkpa ijikọ ma gụọ ozi ịntanetị gị ma ọ bụ kesaa ụfọdụ n'ime akwụkwọ gị. ¿Ihe ị ga-eme: You na-ekpughe onwe gị maka izu ohi nke ozi ma ọ bụ na ị naghị ejikọta ya ozugbo? Enwere ụzọ ọzọ? Ee, mepụta ọwa SSH.
Enwere ụfọdụ ngwaọrụ dị ka SSH na Firefox (ma ọ bụ ihe nchọgharị Internetntanetị ọ bụla ọzọ) nwere ike inyere gị aka wulite njikọ echekwara na kọmputa ị tụkwasịrị obi na Internetntanetị (dịka ọmụmaatụ, nkesa mgbọrọgwụ gị).
Iji doo anya: ka anyị kwuo na ejikọrọ gị na netwọk ọha ma ọ bụ Wi-Fi hotspot. Enwere ọtụtụ ndị gbara gị gburugburu nwere otu njikọ ahụ na ị maghị ihe ọ bụla gbasara onye na-eweta netwọkụ. Kedu ihe ị ga - eme iji nweta njikọ dị nchebe? Mepee ihe a na-akpọ ọwara SSH na igwe a ma ama (n'ozuzu igwe dị anya nke ị nwere) ma zipụ okporo ụzọ niile ị na-ewepụta ihe nchọgharị weebụ gị site na ọwara a.
Enwere ike ime nke a na iwu ssh ndị a:
ssh -N -f -D 8080 aha njirimara @ remote_ssh_server
Ebe aha njirimara bu aha njirimara nke ị na-ejikọkarị site na SSH na igwe ahụ na remote_ssh_server bụ IP ma ọ bụ aha igwe dị anya. Ana m akwado ka ị mee nwoke ssh ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara iwu a.
Ihe iwu gara aga na-eme bụ ọdụ ụgbọ mmiri 8080 dị na igwe mpaghara anyị (127.0.0.1) ebe ọ ga-ege ntị na arịrịọ niile maka nyocha weebụsaịtị wee zipụ ha na igwe dịpụrụ adịpụ. Mgbe ahụ igwe dị n’igwe ga-eziga ngwugwu niile na ntanetị dịka a ga - asị na ha si ebe ahụ na - abịa. Ya mere, IP ọha mmadụ na ihe nchọgharị anyị bụ ihe nkesa dị anya na ọ bụghị igwe nke anyị si na ya.
Nke a nke dị ka Chinese pụtara na ị gbanyela ọdụ ụgbọ mmiri na igwe gị (dịka ọmụmaatụ, 8080) iji zipu ma nata okporo ụzọ weebụ gị n'enweghị nsogbu.
Nanị ihe fọdụrụ bụ ịhazigharị Firefox ma ọ bụ ihe nchọgharị weebụ ị họọrọ iji jiri ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ma hụ na achọrọkwa ihe niile DNS chọrọ site na njikọ a echekwara. Anyị na-aga Dezie> Mmasị> Nke di elu> Network> Njikọ> Nhazi. Ozugbo ahụ, hazie ihe mgbakwunye SOCKS ọhụrụ.
Iji hazie DNS chọrọ, M mesịa banyere: config na Firefox adreesị mmanya ma chọọ ihe ndị a na-agbanwe. Pịa ya ugboro abụọ ka ọ gbanwee ya ezi.
network.proxy.socks_remote_dns; ndabere boolean eziokwu
Iji mee mfe / gbanyụọ ojiji nke a zighachi akwụkwọ nnọchiteanya ị nwere ike ibudata extensions n'ihi Firefox dị ka Ngwa ngwa o FoxyProxy.
Iji mechie ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ị ​​ga-egbu usoro ssh bidoro na iwu egosiputara na mbido post a. Oge ọ bụla ịchọrọ ịmalite njikọ dị nchebe, ị ga-agba ọsọ na ssh iwu ahụ, na-ewebata ụdị dị iche iche nke masịrị gị na mkpa gị (ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nwere ike ịbụ nke ọzọ, ịnwere ike ịfefe ya -C oke ya ka ọ wee gbakwunye ozi niile ahụ , wdg)
Usoro a anaghị ezochi MSN, Skype, ma ọ bụ ọrụ ndị yiri ya ma ọ bụrụ na anyị ahazighi ojiji nke ihe nnọchiteanya proxy na mmemme ndị a. Iji zoo ihe niile, gụnyere ọrụ ndị a, ị ga-emepụta mebere network onwe eji mepeeVPN.
Isi: Linuxaria & Sun Wiki
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Otu esi sọfụ n'enweghị nsogbu na netwọk Wi-Fi
Gịnị bụ bakan Linux 🙂
Kọmputa Guardian dijo
Ezigbo nkwado (na mmelite nke isiokwu mbụ edepụtara) ga-egosi ihe nkesa na-enye anyị ohere guzosie nchebe SSH njikọ na-enweghị ịhapụ ụlọ gị na kọmputa na ???
Zaghachi IT na Ọrụ
Enweghị ụzọ isi mee ya, belụsọ na peeji ahụ bụ HTTPS.
Naanị ma ọ bụrụ na, na iji zere ọgba aghara, m ga-achọ ịkọwapụta na nke a enweghị ihe jikọrọ ya na enwere ike ijikọ site na SSH na igwe ọzọ (na ntanetị gị ma ọ bụ na mpụga). Ihe post a na-atụ aro bụ ihe dị iche iche (ọ bụ ezie na iji ihe ndị dị n'elu): ohere nke iwulite ụzọ dị mma iji kpoo nwayọ na netwọk Wi-Fi na-enweghị nchebe.
Okwesiri ighota na ime ssh tunnel bu otu n'ime ihe ole na ole anyi nwere ike ime iji gbochie mwakpo mitm
Zaghachi Guido Ignacio Ignacio
Eärendil ị nwere ike ịgbakwunye otu esi eme ya maka mgbe anyị gara cyber nwere igwe windo. Otu ihe a nwere ike ime na putty kwa, o doro anya na anyị ga-enwe nke anyị ma ọ bụ mara ssh sava ijikọ.
Naanị ị ga-ahazi ya dị ka ọ dị na mbipụta ihuenyo wee nye ADD, mgbe ahụ ọ bụ otu ihe ahụ enyi ahụ kọwara na post: http://www.subeimagenes.net/images/286Dibujo.jpg
Nwere ike ime nke ahụ site na ama (android dịka ọmụmaatụ)? Ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, m meghere msn site na otu firefox ahụ nke m mere usoro ndị ahụ na ọrụ dịka meebo ma ọ bụ ibe hotmail ahụ, ọ ga-adị mma na ebe ahụ?
Zaghachi na daas88
E. I nwekwara ike hazie ngwa ahịa MSN iji zighachi akwụkwọ nnọchiteanya ọhụrụ ahụ.
Maka ndetu, ị nwere ike ịme njikọ a na akpaghị aka na-enweghị ịrịọ maka okwuntughe. Ekwadoro m ịgụ http://rm-rf.es/login-ssh-sin-password-de-forma-rapida-y-sencilla/
Ebee ka m ga-esi nweta ihe nkesa SSH na IP ọha?
M na-ejikarị desktọọpụ PC m
Ọ ghaghị ịbụ igwe ọzọ nke gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nọ na kpakpando, ọ ga-abụrịrị ụlọ gị ma ọ bụ igwe ọrụ gị. Usoro a (naanị otu amaara m ijikọ na ụzọ "echedoro" na netwọk Wi-Fi mepere emepe) nwere ọghọm ị nwere kọmputa ọzọ na (yana nke ị nwere ike ịtụkwasị obi) iji rụọ ọrụ.
Ọ bụ ụzọ dị mma ... ọ bụ ezie na echeghị m na ọ bụ ihe kachasị nchebe. Achọrọ m ịbanye igodo oge ọ bụla (dịka ya na sudo).
Nke a na - eje ozi iji gafee ndị na - egbochi ndị na - egbochi peeji, dị ka ndị na - eche nche dans?
Nke a bụ enyi m ...
Nchọpụta ahụ sitere na Firefox na osx ee xD
EspressoReader, ụzọ na-enye ume ọhụrụ iji gụọ faili RSS